ဘဝမှတ်တိုင်: Update Kitkat Android Version 4.4.2
Update Kitkat Android Version 4.4.2
Credit..by Ko kyaw Thettun
Note3အတွက် ဖေဖော်ဝါရီ kitkat update ပေးနေပါပြီ။ SM-N9005 သမားများအတွက် N9005XXUENB4 ပါ ။ မလေး စင်ကာပူ ထိုင်း နှစ်သက်ရာဒေါင်းနိုင်ပါသည် ။
Model: SM-N9005 < မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်ပြီး>
Model: SM-N9005 < မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်ပြီး >
Galaxy SM-N9005 Version 4.4.2 ( Singapore ) မြန်မာစာ မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်ပြီး
((( SM-N9005 )))
((( SM-N900 )))
*** အထူးသတိထားရန် ဖုန်းကို ဖန်းဝဲမတင်ခင် Setting-general-security-reactivation lock ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ဖို့လုံးဝ(လုံးဝ) မမေ့ပါနဲ့ ။ setting-general-developer option-usb degubbing ကို ON ဖို့ လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ ***
** setting-general ထဲမှာ developer option ကိုမတွေ့ရင် setting-about device ထဲက Buildnumber ကို ၇ချက်လောက် ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ ။ setting-general ထဲမှာ developer option ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။ **
** တခုအရေးကြီးတာက ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ samsung driver ဒါမှမဟုတ် Kie ကိုအရင်အင်စတောလုပ်ပေးထားရပါမယ် ။ **
အိုဒင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ထို့နောက် အိုဒင်က pda ကိုအမှန်ချစ်ပါ။ ပီးရင် pda ကိုနှိပ် ပီးတော့ ဒေါင်းထားပီးဇစ်ဖြည်ထားတဲ့ .tar ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
အဲဒါပီးသွားရင် ဖုန်းကိုပိတ် ။ ပီးရင် power+home+volume down ကိုတပြိုင်ထဲနှိပ်။ download mode ၀င်တာပြတာနဲ့ အကုန်တပြိုင်ထဲ လွှတ်လိုက်ပါ ။
ပီးရင် volume up တချက်နှိပ် ပီး confirm ရင် download mode ready ဖြစ်ပါပီ ။ အဲဒါပီးရင် ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်လိုက်လိုက်ပါ ။
အဲလိုချိတ်လိုက်လို့ Odin ထဲက ID:COM နေရာမှာ အရောင်လေးနဲ့ပြနေရင်ရပါပီ ။ အဲဒီကျ Start ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ သူလုပ်စရာရှိတာလုပ်ပီးရင် PASS/RESET ပြပီး ဖုန်းရီစတက်ကျပါမယ် ။ သွသူအလုပ်လုပ်နေမယ် ပီးရင် နောက်တခါရီစတက် ထပ်ကျမယ် အာ့ဆိုပီးသွားပါဘီ။
** ဖန်းဝဲတင်နေတုန်း ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်ထားသော usb ကြိုးမလွတ်သွားစေရန် ဂရုစိုက်ပေးပါ **
Samsung USB Driver < ဒါကတော့ရှိပီးသားဆိုမလိုအပ်ပါဘူး ဖုန်းကို Odin ကသိဖို့အတွက် usb driver ဖြစ်ပါတယ် ။ >
Samsung Kie ( kie3ကိုရွေးဒေါင်းပါ )
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/05/2014 08:19:00 am
naingwinthu 27 March 2014 at 20:26
N9005XXUENB4_N9005OLBENA3_XSP.zip ..Can't download bro..please help me..Thz
naingwinthu 28 March 2014 at 19:31
kyawsan 30 March 2014 at 05:37
naingwinthu 31 March 2014 at 18:46
ကူညီပါဗျာ...thankalot ..
kyawsan 14 April 2014 at 06:02
yin 17 May 2014 at 21:30
ကို kyawsan ရေ ကျွန်တော် မနေ့ကမှ Note3ဝယ်လာတာ မြန်မာစာဖောင့်က build-In မပါဘူး။ တခြားလူတွေ မေးကြည့်တော့ ပါပြီးသားလို့ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော် ဖုံးကြမှဘာဖြစ်တယ် မသိဘူး။ Model No. SM-N9005, Andriod Version 4.4.2. PlayStore ထဲက မြန်မာ ဖောင့်ကို download လုပ်တော့လဲ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကူညီပါ အုံး ခင်ဗျာ
kyawsan 27 May 2014 at 21:28
po pyae 29 August 2014 at 01:36
အစ်ကို ကျွန်တော် V4.4.2 တင်ပြီးတော့ ဆမ်းလိုင်းလုံးဝပိတ်သွားတယ်